Nepal: Ny Fitokonan’ireo Madheshi, Ny Governemanta Vonjimaika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2018 5:53 GMT
Mbola vaovao malaza hatrany ny olan'ireo Madheshi - olona mivelona ao amin'ireo lemaka ao atsimon'i Nepal. Ny fivoriana mikasika ireo Zon'ny Mponina ao Madhesh, izay nitarika ny fihetsiketsehana goavana tao Terai atsimo hitakiana ireo tombontsoa mitovy sy ny tsy fanilinkilihana, dia namerina indray koa ireo fitokonana.
Parmendra Bhaga avy amin'ny Demokrasia ho an'i Nepal dia nino fa hadisoana ny nampitsaharana ny fanoherana tamin'ny 7 febroary. Tamin'io andro io, niato vonjimaika ny fanoherana taorian'ny naneken'ny governemanta ho 49 isanjato ny solontenan'ireo Madheshi tao anatin'ny fivorian'ny Antenimiera.
Hadisoana voalohany io fampitsaharana ny fihetseiketsehana tao Terai tamin'ny 7 febroary io. Hadisoana tamin'ny fihetsiketsehana ny tsy fanànana fandaharam-potoana mazava. Ny fandaharam-potoana tamin'izany dia mety ho ny fametrahampialàn'ny Minisitry ny Atitany sy ny fanofanana tsy ho ao amin'ny komisiona mpanao fanadihadiana, na tokony hitohy ireo fitokonana: Niha-nalemy ilay fihetsekitsehana.
Manamafy i Bhagat fa tokony notohizana ny fihetsiketsehana mandra-pivahan'ireo fangatahana rehetra. Tsikerainy ihany koa ny mpanao gazety ho tsy mandrakotra ilay olana, ary ny lehiben'ny vondrona vitsy an'isa ho manameloka an'ireo fitokonana.
Tsy hoe ny herin'ny fitokonan'ireo Madheshi ihany no tsy misy intsony, fa niteraka ihany koa an'ireo tsikera mikasika ny fikatonan'ny fitaterana sy ireo orinasa. Manao jery maika an'ireo fanoherana ny fitokonana ao an-toerana i Dinesh Wagle avy amn'ny United we Blog!.
Ireo baiko hanaovana fitokonana navoakan'ny Vovonana mikasika ny Zon'ireo Mponina ao Madhesh (MPRE) dia nisedra fankahàrana tany amin'ireo faritra isankarazany manerana ilay faritra.
Miaraka amin'ireo Maoista, ireo mpikomy nivadika ho antoko politika, dia miomana hanjohy ny governemanta vonjimaika ao Nepal, tsy mila manontany tena akory hoe nahoana ny tontolombolongana Nepaley no miady hevitra be momba ilay olana. Fantatr'ireo blaogera fa ny fidiran'ireo Maoista ao anaty governemanta dia ho dingana iray miroso makamin'ny zotran'ny fandriampahalemana sy ny fanorenana Nepal vaovao.
Mino i Ghanshyam Ojha ao amin'ny Dedicated to Daniel Pearl fa ny governemanta vonjimaika dia tokony najoro faran'izay haingana indrindra saingy miahiahy izy mikasika ny herisetra mitohy ataon'ireo Maoista.
Ekeko ny hampijoroana araka izay haingana indrindra governemanta vonjimaika ahitana an'ireo Maoista. Na izany aza, tokony hamoaka tatitra iray ampahibemaso ireo Maoista, manambara fa mirotsaka an-tsehatra ry zareo amin'ny fampitsaharana ny herisetra rehetra ; anisan'izany ny fanelingelenana an'ireo antoko politika hafa. Tokony hatsahatr'ireo Maoista ihany koa ny fampideraderàna eny imasom-bahoaka ny fitaovampiadiany.
Ojhakoa manana tatitra mahaliana mikasika ny fomba izay nihaonany tamin'ny mpitondra faratampony, Prachanda, an'ireo Maoista. Toy ny sarimihetsika ny fijoroana vavolombelona izay omeny – ary mampiseho mazava tsara ny fomba fiasan'ireo Maoista ao Nepal.
Hevitra enina mikasika ny fahataràna amin'ny fananganana ny governemanta vonjimaika no tsipihan'i KP Dhungana eo amin'ny Hamro Blog (teny Nepaley) :
1. Tsy ny olona rehetra no mino hoe voaara-maso avokoa ireo fitaovampiadian'ny Maoista
2. Matahotra hetsika revolisionera ataon'ireo Maoista ireo antoko politika hafa taorian'ny nidiran'izy ireo tao anaty governemanta. Izay tsy ahazoan'izy ireo tombony.
3. Tsy ankasitrahan'i Etazonia ny fidiran'ireo Maoista ao anaty governemanta ary irian-dry zareo ny hanakanana izany amin'ny fomba rehetra.
4. Ny fanambaràna ny repoblika no inoan'ireo mpitarika vitsivitsy avy amin'ny Maoista ho toy fomba azo antoka kokoa ho azy ireo fa tsy ny hanatevina laharana ny governemanta.
5. Tsy nisy ny marimaritra niraisana satria ireo Ministera Goavana no notakian'ireo Maoista.
6. Tsy nitsahatra ho mahery setra ireo Maoista.
Eo ampiandrasana izany, mizara ireo fihetsehampony mikasika ny olan'ny tanora Nepaley eo ampikarohana hoavy mamiratra i Deepak Adhikari avy amin'ny Deepak’s Diary